ကဏ္ဍများ – Page 17 – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
အဲကွန်းကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ..!
ပူပြင်းတဲ့နွေရက်တွေကိုအံတုဖို့ အဲကွန်းကို အသုံးပြုလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အေးစိမ့်နေတဲ့ အဲကွန်းခန်း ထဲမှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာ ရှိပေမယ့် အဲကွန်းကြောင့် သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေသလဲဆိုတာ သုတေသီတွေရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ကို အခြေခံပြီး ပြောပြပါမယ်။
ရေချိုးသကဲ့သို့ လန်းဆန်းသွားစေမည့် နည်းများ
(၁) သခွားသီးကိုပါးပါးလှီးပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ကာစားပေးပါ။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေပြီး လန်းဆန်းသွား စေပါတယ်။
အာဒါလွတ်ဥမှာ Gluten ဓါတ်မပါဝင်လို့ အစာအိမ်နာတာ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်း မအီမသာဖြစ်တာ တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖျားနာခြင်း၊ တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းစတဲ့ အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်တွင်းအပူချိန် မြင့်တက်စေတဲ့အပြင် ရာသီဥတုက တဖြည်းဖြည်း ပူပြင်းလာ တာနဲ့အမျှ အပူကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကြောင့် အသက်သေဆုံးသည်အထိ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တွင်း အပူချိန်မြင့်လာတဲ့အခါ အစားအစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တွင်းအပူချိန် လျှော့ချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျင်း ပါးပါးခြစ်ထားပါ။(လက်ဖတ်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)
သခွါးသီး အနေတော် ၁လုံး ပါးပါးလှီးပါ။
သံပရာသီး အနေတော် ၁လုံး ပါးပါးလှီးပါ။
ပူစီနံ အရွတ် (၁၂ ရွတ်)။
အသားပက်၍ ခြေဖနောင့် ကွဲနေပါသလား ?
ခြေဖနောင့်ကွဲခြင်း အတွက်ထိရောက်တဲ့ အိမ်တွင်းသဘာဝ ကုထုံးလေးတွေရှိပါတယ်။ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက် ကြမ်းသူများလဲ ဥတုမရွေး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။